Kukumba | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Momordica: eji, ọgwụgwọ ọgwụ na contraindications
Momordica, ma ọ bụ dịka a na - akpọkwa mkpụrụ pọmigranet India, osisi gourd, rabid ma ọ bụ kukumba India, melonị nke Chinese, bụ osisi vaịn na-acha ahịhịa ndụ nke ezinụlọ ugu. Ala nna nke osisi a bụ India na China. E nwere otu osisi na ụdị osisi. Na mkpokọta, e nwere ihe dị ka ụdị 20 momordica.
Esi nweta cucumbers, ihe ubi na-eji hydroponics
Kriumba a na-emekarị - nke a na-eme kwa afọ nke ezinụlọ Pumpkin. Nke a pụtara na afọ 6,000 gara aga, a na-ewere India dị ka ebe a mụrụ ya. N'ebe oru ugbo nke oge a, enwere otutu uzo isi kota cucumbers: n'elu ihe eji eme ihe, na agba, n'okpuru ihe nkiri, na akpa na akpa, na iji hydroponics, nke di ugbua.
Kukumba-lemon: osisi dị n'ubi
Enwere ọtụtụ cucumbers dị iche iche, nke dịgasị iche iche dịka ntozu okè, ọdịdị, nha, agba, mkpụrụ, iguzogide pests na ọrịa. N'ebe ndị dịpụrụ adịpụ na akwukwo nri n'ubi tumadi toro oval, cylindrical. Otú ọ dị, mmadụ ole na ole maara na e nwere osisi dị iche iche cucumbers, mkpụrụ nke nwere ike ịbụ ma gburugburu na ovate.
Achọrọ m ịnagide okooko osisi efu na cucumbers
Ịkụpụta cucumbers gụnyere ndokwa nke ọdịdị ihe oriri nke okpomọkụ, ọkụ na mmiri. Ma, ọ na-ewe iwe mgbe ọ na-enweghị owuwe ihe ubi. E nwere ọtụtụ okooko osisi na ata, mana ha na-eme ka ihe efu. Ọ na-etịbe n'ihi ụbụrụ na-ezighị ezi na ihe nhiere na teknụzụ ugbo. Ka anyị gbalịa ịchọta ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ okooko osisi efu na kukumba, anyị ga-enyochatakwu ihe kpatara ha.
Nhọrọ nke osisi kukumba kacha mma maka akuku na mba ahụ
Anyị niile maara ụdị nri dị mfe ma dị ọnụ ahịa dị ka kukumba. Kukumba bụ ndị ọbịa mgbe niile na tebụl anyị n'afọ nile: ọ dị ọhụrụ n'oge ọkọchị, na oyi na ụdị pickles. Ọ dịkarịghị izute onye na-elekọta ubi dị otú ahụ, onye na-elekọta ubi agaghị ahụ ihe oriri a. O yiri ka ọ ga-adị mfe, kedu ihe ga-adị mfe kukumba? Ma ha dị iche iche: n'ụdị, nha, agba, n'ikpeazụ, ka o rie.